रोग बढ्दै गएपछि प्रम ओलीलाई अमेरिका लैजाने तयारी - Livenp
सत्यतथ्य चेक/ जाँच
रोग बढ्दै गएपछि प्रम ओलीलाई अमेरिका लैजाने तयारी
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार ०७:२७
काठमाडौं : रोग कम हुनुको साटो बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थप उपचारका लागि फेरी विदेश लैजाने तयारी भएको छ। उनी मृगौलाका दीर्घ रोगी हुन्। १२ बर्ष अघि मृगौला फेल भएपछि उनले भारतको मेदान्त अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए। महाकाली सन्धिमा भारतीय पक्षलाई सहयोग गर्ने काम गरेको कारण उनलाई त्यतिबेला भारतले रुचाएको बताइन्छ। त्यसपछि उनले पटक पटक थाइल्याण्डमा मृगौलाको उपचार गरे। प्रधानमन्त्री भएपछि उनको आर्थिक श्रोत बढ्यो, त्यसपछि उनले सिङ्गापुर उपचार गराउन थाले। केही समयअघि मात्र रगतमा विकारक तत्व क्रेटिनिनको मात्रा बढेपछि उनले सिंगापुरमा २ हप्ता लगाएर पूरै रगत सफा गर्ने गरि प्लाज्मा फेरेसिस गरेका थिए। त्यसपछि पनि उनको अवस्थामा खास सुधार नआएपछि अहिले उनलाई किडनी सही राख्न हरेक हप्ता डाईलाइसिस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
अझ अहिले अकस्मात एपेन्डिक्स फुटेर पेटमा संक्रमण भएपछि उनले एपेन्डिसाइटिसको अपरेशन गराएका थिए। अब चाहि उनलाई फेरी अमेरिकामा नै किडनी फेरी फेर्न लैजाने तयारी भएको बुझिएको छ। एपेन्डिसाइटिसको अपरेशन पश्चात इमर्जेन्सीमा रहेका उनको स्वास्थमा अहिले सुधार आइरहेको छ। तर दीर्घ रोग किडनीको समस्या जटिल हुँदै गएपछि उनलाई अमेरिका नै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
‘मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा पूर्ण ह्रास नआउँदै एकपटक विदेश लैजाने तयारी छ’, उपचारमा संलग्न एक डाक्टरले भने।प्रधानमन्त्री ओलीको एक सातामै दुईपटक डायलासिस गरिसकिएको छ र किदनीले राम्रो काम नगर्दा उनले नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान अहिले आन्तरिक छलफल भइरहेको बताए। ‘अमेरिका नै लैजाने कि अमेरिकी चिकित्सकलाई नेपालमै झिकाएर उपचार गराउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, ती नेताले भने, ‘अमेरिका लैजाने सम्भावना धेरै छ।’
केही समय अघि प्रधानमन्त्रीकी निजी डाक्टर दिबासिंह शाह अमेरिका गएकी थिईन। व्यक्तिगत भेटघाटको लागि अमेरिका गएको भनिए पनि मुख्यतया ओलीको किडनी फेर्नको लागि चाँजोपाँजो मिलाउन उनी त्यता गएको सम्भावना देखाउछन नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य।
किन सिंगापुर छोडेर अमेरिका ?
प्रधानमन्त्रीको औषधी उपचार पहिले भारतबाट शुरु भएर थाइल्याण्ड हुँदै सिंगापुरमा औषधी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको किडनी फेर्नैपर्ने गरि बिग्रिएको र किडनी फेर्नको लागि सिंगापुरमा कडा नियम भएको कारण उनलाई अमेरिका लैजान खोजिएको जानकारहरु बताउछन।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिन १ जनालाई तयार पारिएको बताइन्छ , उनी अहिले अमरिकामा नै छन् । नातामा भान्जे पर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दिन लागेको बताइएको छ।
स्वयम् ओलीले पुनः प्रत्यारोपण अमेरिकामा नै गर्न चाहेका छन्। ओलीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका लैजाने तयारी भएपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण पछि सरेको छ। पार्टीका केन्द्रिय सदस्यहरु लिएर उनी मङ्सिर २५ गते चीन जाने तयारीमा थिए।
‘पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको उपचार विदेश लगेर गरिने गरी आन्तरिक छलफल छ। त्यही कारण अध्यक्ष नेतृत्वको टोलीको चीन भ्रमण धकेलिएको छ,’ दाहालसँगै चीन जाने तयारीमा रहेका नेकपाका एक अर्का नेताले भने।
अहिले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई पनि नेपाल झिकाईएको छ र उनले पनि उक्त बिषयमा आफ्नो तर्फबाट तयारी र सरसहयोग गरिरहेको बुझिएको छ।
सरप्राइज डिस्चार्ज गरिने सम्भावना
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य बिग्रंदै गएको भएपनि बाहिर सकारत्मक इमेज राख्नको लागि कहिले प्रधानमन्त्री ठम्ठम हिंडे , कहिले प्रधानमन्त्रीले आइप्याड हेरे भनेर प्रचार गरिएको छ। त्यसैको सिलसिला स्वरुप सरप्राइज डिस्चार्ज हुने सम्भावना पनि रहेको छ। श्रोतका अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज हुन् सक्नेछन्। तर पनि किड्नीको डायलासिसको लागि उनी पटक पटक फेरी पनि अस्पताल नै जानुपर्ने छ।
यो समाचार बारे तपाइको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला ।
यस लेखलाई फेसबुक तथा टुइटरमा शेयर गर्नुहोस ।
‘बालबालिकाका लागि सुरक्षित र सकारात्मक इन्टरनेटमा जोड दिन आवश्यक’
काठमाडौं । विश्वभर मनाइने ‘सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२०’ नेपालमा पनि...
कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ सय नाघ्यो
चीनमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ९ सय नाघेको छ...
ललिता निवास जग्गा प्रकरण– ठगी मुद्दा चलाउन जाहेरी अभाव
काठमाडाैं । बालुवाटार (ललितानिवास) सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी...
एनआरटीलाई ४-१ ले हराउँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ तेस्रो स्थानमा उक्लियो
कठमाडौं । साबिक विजेता मनाङ मर्स्याङदी क्लब राजधानीमा जारी कतार...
हेटौंडामा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, मोबाइल अन गरेपछि पत्ता लाग्यो हत्यारा
मकवानपुर । गत माघ ४ गते बिहान हेटौंडाको क्याम्पडाँडामा हत्या...
लालपुर्जा नपाएपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा धर्ना, आश्वासन मात्रै नबाँड्न माग
तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका स्थानीयवासीले जग्गा दर्ता प्रक्रियामा भएको...
हाम्रो डिजिटल प्रयोगशालामा भिडियोको परिक्षण यस्तो छ…
मेक्सिकोमा मन्त्रीद्वारा राजीनामा : नेपालमा राजावादीको आरोप
रबिकी श्रीमतीले गरिन चितवनमा आत्महत्या, रबि अहिले जेलमा
मुख्यमन्त्रीद्वारा सेतो प्लेटको सरकारी गाडी रातोप्लेट बनाएर श्रीमतीलाई उपहार !
आत्महत्या अघिको सेल्फी भिडियोले उब्जाएका केही गम्भीर आशंकाहरु
आज रबि लामिछानेको जन्म दिन, कति बर्ष लागे त रबि ?
सम्पादक / प्रकाशक :
सम्पर्क नम्बर: ९८६३८४७८३१
सूचना बिभाग दर्ता नम्बर : १०५३ / ०७५ – ०७६
टिस्टा काङ्गडा मिडिया प्रा लिद्वारा प्रकाशित
केन्द्रिय कार्यालय: कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर २; मैत्रीनगर, काठ्मान्डौ,नेपाल
Email :- ashokabrother@gmail.com
Copyright Tista kangada Media Pvt. Ltd. , All Rights Reserved